कम्प्युटर गुरु (3) कार्टुन (2) खत्र्याकखुत्रुक (13) गीत/गजल/कविता (17) तस्विरहरु (1) यात्रा संस्मरण (1) लोकसेवा तयारी (10) हास्य व्यंग्य (50)
Posted by Sampras Paudel at 5:46 PM No comments: Links to this post
– संप्रस पौडेल 'दिवस'
नेपालमा नयाँ सँस्कृतिको विकास भएको छ 'नातीको न्वारान‚ बाजेको हैरान' । सय वर्ष अघिको इतिहासको प्रामाणिकता नभेटिएको बेला बाहुनले देश बिगारे भन्दै ढोल बजाइन्छ । यतिखेर बाहुनहरु तै चुप मै चुप भैराखेका छन् । यसर्थ बाहुन भएकै कारणले बाहुनबाट अरु जातिले अन्याय भोग्नु परेको हो भन्ने भनाईलाई खण्डन गर्दछु ।
पण्डितबाजेभन्दा पहिले टोल चहार्ने पण्डितको झोला बोल्यो‚ "नेताज्यू बिहानै उठ्नुभो । शौचादी कृयाकलाप गरिसकेपछि गायत्रीवाचन गर्दै गौमुत्रले पवित्र भएर गाउँघर चहार्नु भयो ।" झोलाले बोलेपछि सबैले होला भन्ने ठाने । "जय भोला जय भोला" सबैले एकै स्वरमा भन्न भ्‍याए । नाग टाँसेपछि झोला घर फर्कियो ।
आजकल पण्डित बाजे सबैका घरघर चहार्न भ्याउँदैनन्‚ लोकतन्त्रले उनलाई झनै व्यस्त बनाएको छ । उनी घरमै घोत्लिएर इतिहास खोजिरहेका भेटिन्छन् । भन्छन् "मान्छेहरु ज्यादा झोले भए‚ नेताकाभन्दा झोलेका कुरा विश्वास गर्ने‚ झोलेकै विचार मन पर्ने‚ झोलेकै हुट्टीमा ताली बजाउँने । सबै झोले हुन लागेपछि मैले पनि झोलालाई नै गाउँठाउँ घुमाउँछु‚ सबैलाई विश्वास पनि छ ।"
आटो खाने मुखले माटो खानु नपरोस् । क्रान्तिको नारामा मात्रै बाहुनलाई गाली गरिन्छ‚ जब जब शान्तिका कुरा आउँछ तब तब सबैभन्दा पहिला "ॐ शान्ति" गाउँने त बाहुन नै हुन्छ । घरमा सबैभन्दा बढी ॐ शान्ति गाउँने बाहुन नै हो । इतिहासमा सबैभन्दा बढी खुकुरी कसले चलायो त्यो बाहुनवादको विरोधीलाई नै थाहोला । हत्या‚ हिंसा‚ अपराधमा बाहुन कहिल्यै लागेन । बरु बाहुनलाई हेरेर बाहुनको टुपी‚ ढाका टोपी‚ जनाईमाथि प्रशस्त व्यंग्यवाण भए । कहिले काट्टे बाहुन भनियो‚ कहिले बाहुनको टुपी कहिले एन्टेना न एरियल भनियो । जनाईलाई कुखुराको आन्द्रो भनियो । बाहुन‚ बिहान बिहानै डाउन भनियो । गर्न पनि बाहुनलाई डाउन गर्नुसम्म गरियो ।
इतिहासै हेर्ने हो ने बाहुन जहिल्यै पछाडी पारिएका जाति हो । आफ्नै खेतबारीमा हलो जोत्न पाइएन र अर्काको भरमा खेतबारी जिम्मा लाउनुपर्‍यो । पूजाआजामा धुँवामा रूमल्लिएर फोक्सो बिगार्दै बस्नुपर्‍यो । एउटा बिराउँछ‚ शाखा पिराउँछ भनेजस्तो कुनै एक बाहुनले गरेको अपराधले सबै बाहुन जातिलाई धारे हात लगाउन नमिल्ला कि !
बाहुन बाहुनै हो‚ नुहाए पनि बाहुन गन्हाए पनि बाहुन् भनिन्थ्यो तर के गर्नु त्यही बाहुनलाई कुनचाहिँले हो ठिराउँदो जाडोमा दिनदिनै नुहाउँनुपर्ने र फिलफिलाउँदो धोति लाउँने नियम बनाइदियो । एन्टेना न एरियलका रूपमा टुपी पाल्नुपर्ने भनियो । जागिरमा ठूलो पदभन्दा खरदार, डिठ्ठामै सीमित गरियो । पढ्ने पेशा बाहुनले गर्ने भन्दै बाहुनलाई सुगा बनाएर सुकाइयो । जहाँ गुलियो त्यहाँ बाहुन भुलियो भन्दै ब्राह्मण जातलाई आक्षेप लगाई जातिय द्वन्द्व निम्त्याउँने कोशिस गरियो । मिलेर बसौँ, मिलेर हिँडौँ भन्दा तँ ठूलो जात भन्दै समाजमा अन्य जातिसँग विभेद गराइयो । अरू जातले छोएको पानी पनि खान नहुने भन्दै खाद्य स्वतन्त्रताबाट मुक्त गरियो । परम्परा र धर्मसँस्कृति जोगाउनेभन्दा दुना टपरा सोहोर्ने जातिका रूपमा परिभाषित गरियो ।
ठूलाठूला क्रान्तिहरूमा लाग्ने अन्य जातीलाई तुरून्त मारिदिन्थे । मर्नेका नाम शहीदका कोटीमा सुनौला अक्षरले लेखिन्थे । चारपाटा मुडिएर जीवनभर आफ्ना आफन्त, छिमेकी, समाजको नजरमा गिर्दै पलपल मर्ने जाति बाहुन नै थियो । टंकप्रसाद आचार्यहरू जिउँदो शहीदका एक पात्र हुन् । बाहुनलाई "जातिच्यूत" गराइएको भन्नुको अर्थ नै अन्य जातिलाई सानो र बाहुनलाई ठूलो मानिएको हो । जातिच्यूत गराउने शासक वर्ग कुन जातिका थिए कसैले खोजेनन् । इतिहास हेरौं त ती बाहुन छँदैथिएनन् । अन्य जातिका पो थिए । यसैले जातिगत विभेद तिनैले गरेका हुन् भन्न किन डराउने ? नेपालको राजनीतिलाई उलटपुलट पार्ने हलो क्रान्ति‚ जयतु सँस्कृतम‚ लाइब्रेरी क्रान्ति बाहुनहरुसँग नै सम्बन्धित छन् । तिनलाई चटक्क बिर्सेर सँस्कृत पढेकै भरमा‚ पूजाआजा र श्राद्ध गरेकै कारणले नगरेको अपराध भिराएर बाहुनलाई टपरे बाहुन भन्नेहरुको विद्धता बारे भविष्यले बताउला ।
विगतलाई हेर्नुहोस्‚ बाहुनलाई व्यापारमा निषेध गर्दै धनसम्पत्ति कमाएर सम्पन्न बन्न दिइएन । केवल पढ्ने यन्त्र मात्रै बनाइयो । नपढेकाहरू कुँजिएर बस्नुपर्‍यो । होटलमा मीठो खान नदिएर सामल बोकेर यात्रा गर्नुपर्ने बनाइयो । यसैले मान्नोस् नमान्नोस् 'राष्ट्रिय रोग ग्यास्ट्राइटिस बाहुनबाटै जन्मेको हो' । बाहुन भएकै कारणले जो कसैले हेपिनु र चेपिनु नपरोस् । अरू जातिको उत्थानका नारामा बाहुनहरूले नगरेको अपराधको भार बोक्नु नपरोस् ।
झोला फेरि व्यस्त भयो‚ बोल्यो "श्राद्धमा जानुछ गुरुबा ।"
पण्डित बाजेः "कसको श्राद्ध ?"
झोलाः "श्यामबहादुरको ।"
पण्डितः "त्यो त जिउँदै छ हैन र ? अस्ती चोकमा बाहुनलाई कालोमोसो दलेर देश निकाला गर्नुपर्छ भन्दैथ्यो त ।"
झोलाः "..... आच्या श्यामबहादुरको बाउको पो हो त ।"
पण्डितः "जाउ‚ सबै कर्म पूरा गरेर आउ । ..... सर्वे भवन्तु सुखिनः ।"
पण्डित बिहानी कर्ममा लाग्नुभो । या देवी सर्व भुतेसु तृष्णा रुपिण संस्थिताऽ नमतस्यै नमतस्यै नमतस्यै नमोनमः..... ।
परिवर्तनको बाटोमा सबैलाई स्वागत छ । बाहुनलगायत सबै जातिको जय होस् ।
हालः सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय‚ हेटौंडा
२०७४ श्रावण २१ गते शनिबार समृद्ध समाज दैनिक‚ हेटौैडामा प्रकाशन भएको
Posted by Sampras Paudel at 5:39 PM No comments: Links to this post
जहाँ दिनमा एक छाक खानसम्म नपाएर
भोकभोकै बाँचिरहेका (?) हरु अनगिन्ति छन्,
जहाँ खलोको धान ढिकीमा कुटेर अनी
उब्रेको खाना बटुलेर खानेहरुको अनगिन्ति छन्,
जहाँ जानेर नजानेर भिटामिन ए पाइने
सिस्नोले बाध्यताको तिहुन् टार्नु परेको छ,
जहाँ अत्यधिक उत्पादन हुने हाइब्रिड बिउ किन्दै रोपेर
महंगो मल र खडेरीको मारमा अल्प उब्जाउ हुन्छ,
त्यस्तो देशका किसान हामी
जौ उब्जाएर पूजामा खर्चिरहेछौं,
कोदो उब्जाएर जाँड बनाइरहेछौं,
भात खाने चामलको औसानी र
पुरेतलाई दानदेखि अक्षेतासम्म अनि
चामलको छ्याङ् खाएर भातै खान बिर्सेकाहरु
स्याउको खार्पाली रक्सी बनाएर छाक टारिरहेछौं ।
गुड फ्राइडेमा मातिनेहरुको केको नैतिकता ?
ह्याप्पी होलिडेमा झुम्नेहरुको केको पवित्रता ?
मित्रकी पत्नीसंग पेग लिँदै अश्लिल नाच्नेहरुको कस्तो मित्रता ?
स्वदेशी स्वादमा डुङ्ग गन्हाए पनि
तिमीलाई तिम्रै जस्तै,
हामीलाई नि हाम्रै राष्ट्र र राष्ट्रियता प्यारो छ ।
Posted by Sampras Paudel at 4:11 PM No comments: Links to this post
हेर्दै जा बाटुली,
तेरो छोरालाई डाक्टर बनाउँछु म ।
ढाक्रेको छोरो ढाक्रे नै होला भन्ने तेरो डर,
गोफ्लेलाई ठूलै बनाउँछु भन्ने मेरो रहर,
गोफ्ले तँ राम्ररी पढ,
सरले जे भन्छ त्यही गर्,
होमकको जोहो तँ गर,
नमकको जोहो म गर्छु,
सुन् बाटुली झगडा नगर,
नाम्लो बोक्दै धाएर अर्काका जडौरी लाएर
दिनको पचास भारी बोक्नुछ,
दश रुपियाँको दरले पाँच सय कमाउनु छ,
साहुको भाँडा माझेर र कपडा धोएर
तेरो खाना जोगाइस् मात्र भने पनि
बाउ छोरा खोले खाएर पनि
हेर बाटुली तेरो छोरालाई डाक्टर बनाउँछु म ।
अरुको कुरा सुन्दै नसुन्,
बनावटी कुरा गुन्दै नगुन्,
धनीले मात्र पढ्छन भनी
मनमा कुरा बुन्दै नबुन्,
रक्सी चुरोट छोडौं,
एकबारको जिन्दगीमा अघी बढौं,
तैंले पढाइमा मात्र ध्यान दे छोरा,
रुखो पिठो जे खाएनि
तँ हुन्छ मात्रै भन्दे बाटुली,
मिति २०६९ असार २७ गते
पुनरावेदन अदालत‚ हेटौंडा
Posted by Sampras Paudel at 4:08 PM No comments: Links to this post
नयाँ पुस्ता (New Generation)
सुरिलो स्वर लुकाई डेड मेटल गाउँने भयौ ।
बाउ-आमा सक्षमै थिए च्यातेको लाउँने भयौ ।।
आधा आँखा छोपी कपालले गराउने अरे जलन ।
महंगो मोबाइल पछाडी भिरेर फुटाउने कस्तो चलन ?
चाउचाउ सँस्कृतिमा हुर्केर, चिकेन चिल्ली मात्रै रुच्ने ।
बिरामी भए त उपचारै गरुँला, गए ज्यान कहाँ खोज्ने ?
झर्झराउँदो पालुवा पलाउने बेला, ओइलायौ कि झैं लाग्दछ ।
कलियुगमा केटाकेटी हरे, बहुलायौ कि झै लाग्दछ ।।
मादल बेच्यौ अरे, खैजडी भजनमा लाज भो भन्छन् ।
इज्जत हुर्मतको 'बाल मतलब' रे पैसा मात्रै पो गन्छन् ।
Posted by Sampras Paudel at 7:28 AM No comments: Links to this post
Labels: गीत/गजल/कविता, हास्य व्यंग्य
मन्त्रिज्यूका पाँच कामः गरीब हटाउने अभियान
संप्रस पौडेल 'दिवस'
मन्त्री हुनु त यस्तो
जुन काम पनि आफैंबाट शुरु गर्ने ।
कुरा जे गरे पनि बेकार भन्ने
कुरा जति गरे पनि धिक्कार भन्ने
यस्ता होनहार विचारका धनी माननीय
भाषणताषण गर्ने समय होइन यो भन्दै जाग्याछन्‚
आफैंबाट परिवर्तन गरेरै देखाउँछु भनेर लाग्याछन् ।
पहिलो काम गरीबी घटाउनु अरे
देशमा गरीबी घटाउनका लागि‚
आफैंबाट शुरु गरे‚
तीन तीन बंगला बनाए‚
छोराछोरी र सालासालीलाई
एकौटा गाडी किनिदिए
धर्मपत्नीलाई मितव्ययी बन्दै कनिकुथी
दुई सय थान साडी किनिदिए ।
दोश्रो काम; बाटाघाटा खाल्डाखुल्डी देखेर
पर्खालभित्र एउटा पौडी पोखरीको खाल्डो खनाएछन्
मर्निङ वाकका लागि जम्मा दुई करोड खर्चेर
सानो खेल मैदान पनि बनाएछन् ।
तेश्रो काम; खुल‍ा दिसामुक्त क्षेत्र भन्थे
झण्डै आधा करोड खर्चेर शौचालय बनाए
नयाँ शौचालयको उद्घाटन
प्रधानमन्त्रीबाट गराउने अरे
योजना‚ निर्माण र कार्यक्रमको खर्च
शहरी विकास मन्त्रालयबाट भराउने अरे ।
चौथो काम दाइजोनिषेधित क्षेत्र भन्थे
दाइजो लिनेदिनेलाई कारबाही गर्छु भन्नेले
आफ्नो स्रोतमा दाइजोबापतको सुनचाँदी
हिरा र बैंक ब्यालेन्स लेखाए
पैतृक तीन कठ्ठा र दाइजोको तीस बिगाहा देखाए ।
पाँचौं काम; कर्मयोगीलाई करछुट भन्दै
आफ्ना आफन्तका उद्योगधन्दाहरुलाई
व्यापक करछुट गराए
आफूले जस्तै अरु मन्त्रीले पनि
गरीबी निवारणमा लाग्नुपर्छ भन्दै कराए ।
जुन काम पनि आफैंबाट शुरु गर्ने
हिजै मात्र भन्थेः
"मन्त्री परिषदको बैठकमा मन्त्रीहरुलाई
जाबो गरीबी हटाउँन नसक्ने भन्दै हकारेँ
आए जति लतार्नोस्‚ भन्दै एक ढ्याउ डकारेँ ।"
हतार भैसक्यो अरे‚
लौ न गरीबी आजैबाट निर्मूल गर्नुछ‚
जेहोस् गरीबी आफैंबाट निर्मूल गर्नुछ ।
२०७४ श्रावण १०‚ हेटौंडा
Posted by Sampras Paudel at 6:58 AM No comments: Links to this post
तिम्रो इङ्लिश र मेरो अंग्रेजी
तिम्रो इङ्लिश र मेरो अंग्रेजीः (part-5)
* UNICEF लाई युनिसेफ भन्न हुने भए WHO लाई 'हु' किन भन्न नहुने ?
* शिक्षकले school भनेर सिकाए व्यापारीले skul भन्दैछन् ।
* वाच सेन्टरलाई व्यापारीले 'वाँच सेन्टर' बनाइदिए ।
* डाम्नालाई damn भन्यौ ।
* एजुकेसनलाई एडुकेसन भन्यौ ।
* गाली गर्दा डुडेँ नभन्नु भन्दै ड्यूड (dude) भन्न सिकायौ।
* फाइनान्सलाई फिनान्स भन्न सिकायौ ।
* फिनेललाई फिनाइल भन्नु पर्छ भन्यौ ।
* देश र ट्वाइलेटको नाम ल्याटिन कसरी भयो ?
*aलाई अ भन्ने कि ए ?
* जक्सन, ज्याक्सन, जैक्सनमा के भिन्नता ?
* अड्कलाइजेशन, अन्दाजीफिकेसन, नेपालोप्याथी, सोमरसोथेरापी, मोज योरसेल्फ नेपाङ्ग्रेजी शब्द खुबै चलेका छन् । यो पनि तिम्रो कमाल हो कि ?
अली अली जानेको मेरो अंग्रेजी सखाप बनाएर सिध्यायौ इङ्लिशवाला हो ।
Posted by Sampras Paudel at 5:33 PM No comments: Links to this post
“दशैंले डामेको एक महिना नबित्दै तिहारको अगुल्टो थाप्नुपर्‍यो, छोरीको बे पनि यै बेला । खर्च त भो भो भाउ बढाउनेकै लागि चुनाउको चाड पनि आउँदैछ रे” भन्दै कर्किनी बज्यै कर्किइन् । महंगीले “बज्यै” भनी बोलाउला भनी त्यसै त्यसै झर्किइन् । सरकारी राहतको समाचार र व्यापारीको आहतको अत्याचारले अचारभन्दा अमिलो मन पारी थैली फुकाउन लागेकी कर्किनी बज्यैलाई दशैंतिहारको ऋणको व्याज तिर्न पो ज्यादा चिन्ता थियो । तिहारमा मरमसालाको जोहो, माइतसम्म जान लाग्ने भाडा र फर्किँदा दाजुभाइको दक्षिणामा थप्नुपर्ने पैसाको जोहो गर्न पनि उनलाई हम्मे हम्मे भयो रे । “हाम्रा बाजे गरिब भए पैसैविनाले” भन्दै आहान सुनाउने उनी जस्ता मेरा गावैभरी तितरवितर भई रन्थनिएका छन् । “एउटाले ऋण खोजेर धेरै व्याज खाने आशले आसामी लगाएको लगानी नउठेपछि मेटासिट किन्न गएको उतै बेपत्ता भयो” भन्दै ‘एफएम टावर’ उपनाम राखिएकी सुबेदार्नी बज्यैबाट पधेँरामा समाचार वाचन भैरहेको थियो । उता आलु बेचेर आँगन ढलान गरेका आलु साह, अदुवा बेचेर कुखुरा पालन गरेका कुखुरा अधिकारीदेखि बोर्डिङ्ग खोलेर स्वाहा भएका प्रा.लि. बिडारीसम्मलाई चाडबाडको महंगीले चुर्लुम्म डुबाएको थियो । नाम मात्रका पाँडे काजीदेखि ट्विँके दर्जीसम्म र गाउँले हतियारका डिजाइनर बिश्वकर्मा काकादेखि मागेरै ठुटे चुरोटले जिन्दगी गुजार्ने हुक्के हजुर्बासम्मलाई चाडबाडको महंगीको लंगौटी बिक्ने भए बेचुँ कि राखुँ भएको थियो । सानातिना ज्ञान लिन बुद्ध जस्तो रुखमुनी बास र योगी जस्तो भिखको आश गर्नु पर्दैन भन्ने भनाई मेरा गाउँलेहरुबाटै सिक्न सकिन्छ ।
बिगतको चुनाउँलाई बिर्सँदै दैलाको ठेलामा घामको झूल्को नपुग्दै मेला जानुपर्ने हुँदा राजनीतिक गफमा कसैलाई चासो हुन छोडेको थियो । खेताला जाँदा बचाएको दुई मुठी भटमासले बेलुकाको तरकारीको गर्जो टार्नुपर्ने हुनाले देशको तिर्तियांश वा पूर्ण बजेटको कसैलाई हेक्कै थिएन । कुखुरा बासेपछि उज्यालो हुने र झ्याउँकिरी गुञ्जिएपछि साँझ पर्ने कुरो बाहेक पृथ्वी घुमेर दिनरात हुने गरेको कुरो कसैलाई सुनाउँनै हुन्थेन । नेताहरु गाउँ पसेपछि चुनाउको नाटक मञ्चन हुन लागेछ भनी चउर र दोबाटो, चौबाटोहरुमा गाउँलेहरु थुप्रिन्थे । भाषणै सुन्न त किन जान्थे र ? बरु आपूmले टेलिभिजनमा देखेका अनुहार साँच्चै चैं कस्ता हुने रहेछन् भनी हेर्न र भरे टेलिभिजनमा भिडिओ आउला कि भनी नेताको वरिपरि झुम्मिन्थे । नेताहरु पनि चिनेझैं घरघरमा नमस्कारको काउसो बोकेर आउँथे । तैपनि मेरा सोझा गाउँलेहरु साँढे पालेर दुध खोजे जस्तो भोट हालेर विकास खोज्दथे ।
टेलिभिजन हेर्दा दुई चार थान नयाँ कम्युनिष्ट नेताहरुले दशैंमा टिका नलगाएकामा पण्डित काका रिसले रन्थनिएका थिए । ब्लड प्रेसर हुनेले आवेशमा आउनु हुन्न भनी डाक्टरले भनेका भनाईमा काका ओठ लेप्य्राउँदै टाउको हल्लाउँथे । बगरेले मासु खुर्किएर हड्डी मात्रै बाँकी राखे जस्तो नेपालका डाक्टरले बगली र सम्पत्ति खुर्किएर गरिब हुन पुगेकाले गाउलेहरु बाध्यताले आज पनि धामीझाँक्रीलाई सस्ता र सुलभ डाक्टर मानिरहेका छन् ।
देउसी भैलीलाई दियोमा बत्ति बालेर नाङ्लामा धान चामल, टपरीमा सेल रोटी सजिएका दिनहरु नेताका तालु जस्तै खुइलिसकेछन् । देउसी भैली आउनु एक हप्तापूर्व नै हजार हजारको लमतन्ने बाह्रहाते चिठी र भाग्यमानीलाई कहिल्यै नपर्ने भाग्योदय चिठ्ठाहरुले गाउँ तिहार अघि नै कंगाल बनाउन थालेको रहेछ । सरकार पनि कंगालको कंकाल सर्लाकी भनी अंगाल्न डराउँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा नपाएर पनि भावी पिँढीले भोट हाल्न सिकुन् भन्दै गाउँलेहरु भोट हाल्दाहाल्दै मर्दा रहेछन् ।
दशैं तिहारमा जुवा तासले गाँस न बास भएका र साहुको ऋणले उठिबास भएकाहरु धेरै भएपछि सरकारका गरिबी परिचयपत्र मेरै गाउँमा एक खाङ्ग्रे बाँड्नुपर्ला कि भन्ने लागेको छ । प्रजातन्त्रले तन्त्रेको, बहुदलले बहुलाएको, लोकतन्त्रले लुछेको र गणतन्त्रले गुण्डागर्दी बढाएको वास्तविकता बताउँदा गाउँलेहरु चुनाउमा उठ्नोस् भोट तपाइलाई दिम्छम् भन्न थालेका छन् । “उठ बाओ उठ, गाउँलेहरुलाई नेतालाई भोट हालेदेखिम् एक से आठ गाई दान गरे सरह धर्म हुन्छ भन्नुपर्छ अझै भोट हाल्चन् बाओ“ भन्दै जुठे काका कोरा सर्टिफिकेटी बेरोजगार म आफैंलाई चुनाउमा उठ्नलाई कर गर्दै लेघ्रो तान्दैछन् । संविधान सभाको भोट हालेर राजनीतिको जुठो लाइयो, खै चुनाउमा उठ्न्या हुन् कि राजनीतिबाटै चुठ्न्याहुम् ? बिलखबन्दमा छुु । हारेर पनि पद पाइयो भने त ठीकै भो नत्र न चुनाउको चौपाटे मुण्डन र पञ्चखत डाम देखाएर गाउँशहर गर्नु पर्न्या बेलाँ केरी मुख देखार हिँड्नु खै ! अस्तु ।
Posted by Sampras Paudel at 6:48 PM No comments: Links to this post
समसामयिक (2016 July)
1. प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको सरकार प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको कतिऔं सरकार हो ? २२औं
2. दार्जिलिङमा भानु जयन्ति समारोहमा कहिले भारतका राष्ट्रपतिले उपस्थिति जनाएका हुन् ? २०७३ असार २९ औ २०३औं जन्मजयन्ति (स्मरण रहोस्ः सिक्किम, दार्जिलिङ, असम लगायत क्षेत्रमा भानु जयन्तिका दिनमा सार्वजनिक विदा दिइन्छ)
3.सन् २०१६ को युरो कपमा कुन देशले विजय प्राप्त गर्‍यो ? पोर्चुगल (1-0 गोल अन्तर)
Posted by Sampras Paudel at 4:39 PM No comments: Links to this post
Labels: लोकसेवा तयारी
युरोकप २०१६ बारे समसामयिक सामान्यज्ञान प्रश्नोत्तरः
* विजेताः पोर्चुगल
* उपविजेताः फ्रान्स
* आयोजक राष्ट्रः फ्रान्स
* फाइनलमा गोल अन्तरः १-०
* सर्बाधिक गोल (गोल्डेन बुटको उपाधि): एन्टोइन ग्रिजम्यान
>>अंकसम्बन्धी विविध (स्रोतः अनलाइन खबर)
* ० – युरो २०१६ को पोर्चुगल र फ्रान्सबीचको फाइनल खेल युरोको इतिहासमा एकमात्र फाइनल हो जसमा निर्धारित ९० मिनेटको समयमा कुनै गोल भएन ।
* ४ – वेल्सका आरोन राम्से र बेल्जियमका इडेन हाजार्ड युरो २०१६ मा गोलका लागि सबैभन्दा धेरै पास उपलब्ध गराउने खेलाडी हुन् । उनीहरु दुवैले ४/४ एसिष्ट गरेका थिए ।
* ६ – एन्टोइन गि्रजम्यानले यस युरोमा समग्रमा ६ गोल गरे । उनले प्रतियोगितामा सर्बाधिक गोल गर्दै गोल्डेन बुटमात्र पाएनन् सन् १९८४ को संस्करणपछि एकै प्रतियोगितामा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडीसमेत बने ।
* ९ – क्रिष्टियानो रोनाल्डोले वेल्सबिरुद्धको गोलसँगै युरोपियन च्याम्पियनसीपमा धेरै ९ गोल गर्ने फ्रान्सका मिचेल प्लाटिनीको कीर्तिमान बराबरी गरे । साथै उनी पोर्चुगिज जर्सीमा छुट्टाछुट्टै चार प्रतियोगितामा गोल गर्ने एक्ला खेलाडीसमेत बने ।
* १८ बर्ष ३२८ दिन – पोर्चुगिज युवा मिडफिल्डर रेनाटो सान्चेस युरोकप खेल्ने अहिलेसम्मकै कान्छा खेलाडी बने । उनले टिममेट क्रिष्टियानो रोनाल्डोको कीर्तिमान भंग गरेका हुन् । रोनाल्डोले २००४ को युरोमा १९ बर्ष १५० दिनको उमेरमा युरोमा डेब्यू गरेका थिए ।
* २१ – पुनः रोनाल्डो नै । उनले सन् २००४ यता अहिलेसम्म युरो अन्तर्गतका खेलमा २१ क्याप जिते । त्यो आफैमा कीर्तिमान हो ।
* २७ – आइसल्याण्डका गोलकिपर हान्नेस् हाल्डोरसनले प्रतियोगिताका पाँच खेलमा विपक्षीका २७ प्रहार बचाउ गरे । यो प्रति म्याच ५ बचाउभन्दा धेरै हो ।
* ३२.८ – सबैभन्दा द्रुत खेलाडीको रुपमा यस युरोमा फ्रेन्च स्ट्राइकर किंगस्ले कोमान चम्किए । उनले ३२.८ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा दौडेको रेकर्ड भएको छ । बेल्जियमका लाइभवाइर यान्नीक कारास्कोपनि ३२.३ किलोमिटर प्रतिघण्टामा दौडेका थिए ।
* ४० बर्ष ८६ दिन – ग्याबोर किर्ले हंगेरीका गोलरक्षक हुन् । चालीस बर्षभन्दा बढि उमेरका उनी युरोकपमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा पाका खेलाडीको रुपमा कीर्तिमान राख्न सफल भए । पाइजामा म्यानको नामबाट चर्चित उनी प्रिक्वाटरफाइनलमा बेल्जियमसँग पराजित हुँदापनि उत्कृष्ट लयमा थिए ।
* ४१ – पोर्चुगलले ठूला प्रतियोगितामा फ्रान्सलाई हराएको यो ४१ बर्षपछि पहिलो पटक हो ।
* ५६ – फ्रान्सले घरैमा भएको ठूला प्रतियोगिता अन्तर्गतको खेलमा पराजय ब्यहोरेको यो ५६ बर्षपछि पहिलो पटक हो । यसअघि सन् १९६० को युरोमा घरेलु टोली फ्रान्सले चेकोस्लोभाकियासँग २-० ले हारेको थियो ।
* ६६.६७ – यस युरोको नियमित समयमा पाएको पेनाल्टी अवसरमा दुई तिहाईमात्र गोलमा परिणत भयो । रोनाल्डो, सर्जियो रामोस, अजेक्जेदार ड्रागोभिक र मेसुट ओजिलको पेनाल्टी गोल हुन सकेको थिएन ।
* १०० – पोल्याण्डका रोवर्ट लेवाण्डोस्कीले खेल सुरु भएको केवल १०० सेकेण्डमै पोर्चुगलबिरुद्धको क्वाटरफाइनलमा गोल गरेका थिए । यो युरो इतिहासकै दोस्रो द्रुत गोल थियो । यसअघि सन् २००४ को युरोमा रुसका दिमित्री किरिचेन्कोले ग्रीसबिरुद्ध ६७ सेकेण्डमा गोल गरेका थिए ।
* १०८ – यस युरोमा भएका जम्मा गोलको सङ्ख्या १०८ हो । ५१ खेलमा २.१२ प्रतिखेलका दरले औषतमा प्रति ४४ मिनेट गोल भएको छ । यो आंकडा यसअघिको युरोको भन्दा थोरै हो । २०१२ मा २.४५ को औषतमा गोल भएको थियो ।
* ६०० – नानीले समूह चरणको पहिलो खेलमा आइसल्याण्डबिरुद्ध गरेको गोलले भलै पोर्चुगलले जित हात पार्न सकेन । तर त्यो गोल युरो इतिहासको ६ सयौं गोल थियो ।
* २४ लाख २७ हजार ३०३ – यो आंकडा युरो २०१६ को अवधिमा रंगशालामै पुगेर खेल हेर्ने समर्थकको हो । औषतमा प्रति खेल ४७ हजार ५९४ जनाका दरले समर्थ रंगशाला पुगेका थिए । यो आंकडा सन् १९८८ को युरोपछि सबैभन्दा धेरै हो । जतिबेला ८ टोलीको मात्र सहभागिता रहन्थ्यो ।
Posted by Sampras Paudel at 4:26 PM No comments: Links to this post
नयाँ पुस्ताको चासो
एउटा बेग्लै स्वादको ब्लग
यो बाटो कहाँ जाने कहाँ पुग्ने हो...
ज्यानको परवाह नगरी सदियौंदेखि हामी यसरी नै तरिरहेछौं‚ कैयौं पटक ट्युव पल्टिएको छ । धन्न यसकै कारण हामीले मर्नु परेको छैन । ट्युव नहुँदा खोला तर्ने क्रममा धेरै जनधनको क्षति भएको इतिहास छ हामीसँग । सरकारसँग पूलको माग गरेका छौं । शायद यस्तो दिनको अन्त्य हुनेछ ।
नादेपानी गुम्बा‚ पोखरा
फोटोः संप्रस‚ २०६४
सिद्धार्थ उच्च मा.वि.‚ हेटौंडामा
चित्र हातले कोरिँदैन‚ यो त मष्तिस्कले कोर्ने हो । - माइकल एन्जेलो
हातमा सिर्जना गरिएको कला
एकताका पुनरावेदन अदालत‚ हेटौंडामा कार्यरत रहँदा
पतञ्जली योगपीठ‚ हरिद्वारमा
२०६९ मंसिर महिनामा श्री सिद्धार्थ उच्च मा.वि. हेटौंडा परिवारका साथमा
वन पिल्लर ब्रिज‚ कर्णाली
२०६९ मंसिर महिनामा श्री सिद्धार्थ उच्च मा.वि.‚ हेटौंडा परिवारका साथमा कर्णाली पूलमाथि एक स्न्याप
वीरहरुको नालापानी किल्लामा एकदिन
बहादुर वीर नेपालीहरुको रगतले सिञ्चित पवित्रभूमि नालापानी (हाल भारतमा पर्दछ) को बलभद्र खलंगा युद्ध स्मारकमा
आहा क्या रमाइलो
उज्यालो हुनु अगावै खिचिएको नैनीताल‚ भारत
आहा झन् रमाइलो
झिस्मिसेमा खिचिएको नैनीतालको दृश्य र साथमा शिक्षक शिक्षिका
हिन्दुहरुको पवित्रभूमि हरिद्वार
पवित्र तथा प्रसिद्ध भूमि हरिद्वारमा तीन दिन बास बसियो ।‚ २०६९
छुकछुक छुकछुक रेलगाडीमा...
ट्रेन चढ्नुअघि सुगौली स्टेशनमा शिक्षकहरुसाथ
पैसा कमाउने उपाय
– संप्रस पौडेल ‘ दिवस ’ शान्त रहने उपाय खोज्दा योगासन र ध्यान भन्ने सुझाउ आए । मन स्थिर गर्ने उपाय सुझ्दा व्यस्त रहने सुझाउ...